बाहुबली–२ को रेकर्ड : एकै दिनमा कमायो ११५ करोड - Everest Dainik - News from Nepal
बाहुबली–२ को रेकर्ड : एकै दिनमा कमायो ११५ करोड
बैशाख १६ । शुक्रवार रिलिज भएको चलचित्र ‘बाहुबली–२ द कन्क्लूजन’ले प्रदर्शनको पहिलो दिनमै ११५ करोड कमाएको छ । यो अहिलेसम्मकै चलचित्रले पहिलो दिन कमाउने रकममा सबैभन्दा बढी हो ।
ट्रेड एनालिस्ट रमेश बालाका अनुसार चलचित्रका सबै भर्जनले बक्स अफिसमा पहिले दिन ११५ करोड भारतिय रुपैयाँ कलेक्शन गरेको छ । चलचित्रले कलेक्शनको आधारमा बाहुबलीको पहिलो भाग , ‘कबाली ’ र ‘सुल्तान’ भन्दा अगाडि रहेको छ ।
पहिलो दिन चलचित्रको प्रत्येक सेकेण्डमा १२ टिकट अनलाइन बिक्री भएका छन् । भारतिय रुपैयाँ २७० करोडको बजेटमा बनेको चलचित्र बाहुबली–२ पहिले नै नाफामा रहेको छ । चलचित्रले रिलीज हुनुभन्दा पहिले नै थिएट्रिकल राइट्स बेचेर ५०० करोड भारु भन्दा ज्यादा कमाई गरेको छ ।
ट्रेड एनालिस्ट रमेश बालाले शुक्रबार ट्वीट गर्दै ‘एस. एस. राजामौलीद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘बाहुबली २’ हिन्दी भर्जनले बक्स अफिसमा पहिले दिन ३८.५ करोड रुपैयाँ कमाएको छ ’ लेखेका छन् ।
चलचित्रले आन्ध्रप्रदेश र तेलंगानामा ५३ करोड, कर्नाटकमा १० करोड, तमिलनाडुमा ९ करोड र केरेलामा ४।५ करोड रुपैयाँ कमाएको छ ।
ट्याग्स: babubali 2